Kedu ihe njem kachasị mma maka ekwentị, igwefoto DSLR, GoPro, ma ọ bụ igwe okwu? | Martech Zone
M ugbu a na-ebu nke ukwuu audio akụrụngwa na m na m zụrụ a azu paaki na wiil, Akpa ozi m dị nnọọ arọ. Mgbe akpa m na-ọma-haziri ahazi, M ka na-amasị na-ibu arọ site enweghị ọtụtụ nke ọ bụla ụdị ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa m na-eweta na m.
Otu isiokwu bụ nchịkọta nke tripods m na-ebu. M nwere a obere desktọọpụ tripod, ọzọ na-agbanwe agbanwe, na mgbe ọzọ bụ kpere m ama. Ọ dị oke. Echere m na m nwalere ihe ọ bụla obere njem na ahịa - ruo mgbe m nwalere UBeesize Njem X.
Ọ bụ njem na-agbanwe agbanwe nke dị mfe ma nwee obere ọ nwere ụkwụ kachasị ogologo m chọtara - 12 ″. O siri ike iji kwụnye igwefoto DSLR zuru ezu ma ọ bụ igwefoto na, wee bịa na ọtụtụ ngwa:
Ihe nlekota ekwentị nke ekwentị maka iPhone / gam akporo ekwentị
Isi swivel na-ekpochi ebe
Nkwụnye GoPro Mount
Bọtịnụ igwefoto Bluetooth
Thekwụ abụọ ahụ na-agbanwe ma na-ekpuchi ya na mkpuchi roba dị nro nke na-adịghị adọka ma ọ bụ kewaa, mana na-ejide ihe ọ bụla ịchọrọ iji bulie ya na ma ọ bụ gburugburu. Na, n'ezie, ụkwụ dị ogologo iji mee ka ọ ghara ịma jijiji ma ọ bụ daa - ọbụlagodi na igwefoto dị arọ na ya.
Enwerem nnukwu Igwe okwu Apogee na m na-ebu m ka m mee pọdkastị n'okporo ụzọ, mana njem ahụ anaghị adị ogologo nke ukwuu ka m wee nwee ike ịhazigharị ya na akwụkwọ ụfọdụ - ọ ga-amịkarị ma jiri ụkwụ njem plastik na-amị amị. Usoro njem a anaghị atụgharị ma nye m ohere itinye igwe okwu ebe m chọrọ ya. Ma ebe ọ bụ na ọnụahịa ha ruru $ 20, azụrụ m ole na ole - maka ụlọ, ọfịs, na akpaazụ.
Ngosipụta: Ana m eji nke m Njikọ Mgbakwunye Amazon ke ibuotikọ emi.
Tags: njem camcorderigwefoto dijitalụigwefoto dijitalụUgboroIgwefoto DSLRnjem dslrmgbanwe tripodGoProgopro tripodipod tripodokwuigwe okwu tripodekwentịobere njemtripod ekwentịtripodubeesize njemmechie njem